अरुण थापाको झल्को दिने स्वर | Jukson
नारायण गोपाल पछि अत्यधिक आम नेपाली श्रोताहरुको मनमा बसेका कलाकार हुन स्व. अरुण थापा । त्यस्तो के गुणले उनलाई सदाबाहार बनायो त ? उत्तर धेरै होलान्। तर साझा उत्तर भने सबैको एउटै छ। त्यो हो उनको गीत Catchy, सरल (?) ,सबैले बुझ्ने र हृदयमा छुने छन्। तर कसै कसैसित नमिल्ने उनको स्वरको बेग्लै गुण चै नाके स्वर हो ।
भनिन्छ,उनको संघर्षका दिनहरुमा त्यो नाके स्वरलाई धेरैले अवगुणको रुपमा लिएका थिए । तर यहि नाके स्वरले सबैको मन मस्तिकमा अमिट छाप भएर बस्यो। सायद त्यो रेडियो नेपालको जमानामा सबिन राईले स्वर परीक्षा दिएको भए संगीत फाँटका हाकीम नातिकाजी,शिव शंकर ज्युहरुले “भाइ! भो भो अब पुग्यो, घर जाऊ “,भन्नुहुन्थ्यो होला।
तर गीतमा चुर्लुम्मै डुबेर गाउने अरुण थापा त्यस बखत पनि चर्चाको चुलीमा पुग्न सफल रहे । उनीमा असाधारण गुण निहित रहेछ जुन आफैसँग सदालाई लिएर विदा हुनु भयो किनकि उनको झै दुरुस्तै स्वर कसैले गाउन सकेका छैनन् ।
केही हदसम्म मिल्ने स्वर भने हामीले हाम्रो हङकङमा पत्तो लगायोैं । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका १०-रामबजार घर भई २० बर्ष यता हङकङ बस्दै आएका कृष्ण काइदाले एउटा बैठकी कार्यक्रममा जब अरुणको गीत गाए सबै चकित परे। उनलाई यसरी अघि सार्ने उनको परममित्र थिए भिम पुन। ड्रमर पुनकै अग्रसरतामा हङकङमै बसोबास गरिरहेका विक्रम गुरुङको शब्दमा अरुण थापाले गाएको पुरानो गीत”कतै टाढा तिमीबाट पुगेँ भने” भन्ने गीत पून: रिकर्ड गराएर कलाकार काइदा प्रथम पल्ट उदाएका छन् ।
कृष्ण जातले गुरु‍ङ हुन्। तर कृष्ण गुरुङको नाम सारै कम भएकाले काइदा राखिदिएको अर्को रहस्य थाहा भएको छ । हो पनि यहाँ हङकङमा मात्रै दश जना कृष्ण गुरुङ त मैले मात्र चिन्छु। ‘काइदा’को अर्थ के हो भनी सोद्धा उनि लजाउदै “ राम्रो भनेको , दाइ” मात्र भन्छन् । मेलै झट्ट सम्झिएँ केटाहरुले भनेको,”यो केटी त काइदाको रैछ।”
अब हेरोै यो गीतले काइदालाई कति फाइदा पुर्याउने छ। नत्र भने आफ्नो मोैलिक गीत तर अरुणको टोनमा आउने उनको धोको छ। त्यो गीतलाई लिई काइदाको संगीत बनाउने जिम्मा लिनुपर्ने भएको छ।
तपाईंलाई काइदा भाइको स्वर कति हदसम्म स्वर्गीय अरुण थापा सँग मिले जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन , सुनी हेर्नुस् त!